Isiqendu VI: Ukubuya kweeJedi Special Edition Changes
Njengamanye ama- Star Wars Special Editions , uninzi lweenguqu ezincinane zenziwe kwiNgqungquthela ye-VI: Ukubuyiswa kwe-Jedi Special Edition ngo-1997, njengokufaka ukuqhuma okuphawulekayo kwi-Star Star kunye nokulungisa iziphene eziqhubekayo (njenge-TIE fighters mysteryly yalala). Uninzi lweenguqu kwiRedi yeJedi ayinayo impembelelo kwi-movie, kodwa utshintsho kwisiganeko sokubhiyozela kunceda ukudala isiphephelo esiphezulu kunye esonelisayo kwiimifanekiso zintandathu ze- Star Wars .
Inguqu enkulu kwisimo kwiNdlu yeJabba yayingumculo. Inombolo yomculo odeleyo, "Jedi Rocks," ithatha indawo yeyona "original Lapti Nek" kunye ne-Twi'lek dancer i-Oola ixhaswa ngabadlali abaninzi. Utshintsho lomculo aluyithinteli loo ndawo ngenye indlela, nangona abanye abalandeli banokukhetha umzila wokuqala.
I-shot ye-Oola kwiRancor Pit, kodwa ke, ithatha enye imfihlelo, mhlawumbi iyanciphisa impembelelo yecala kamva apho uLuka ebhekene neRancor. Eminye imibhalo engezantsi yongezwa kwi-intetho yeJabba, into ephazamisayo icinga ukuguqulelwa kwe-C-3PO; Ezi zikhutshwe kwi-DVD ye-DVD.
I-Pit of Carkoon
Ekubuyiselweni kwasekuqaleni kweJedi , i-Pit of Carkoon, indawo yokuhlala indawo yaseSarlacc, yayingumngxuma we-nondescript kunye namacala athile. Ukuphucula ingozi yengozi, iintambo ezininzi kunye nomlomo onjengomlenze wongezwa kwi-Sarlacc kwi-Special Edition.
Nangona ngokuqinisekileyo kunomdla ngakumbi kunokoqobo, utshintsho lwezandla luhamba umgca phakathi komsebenzi ophezulu kunye nangaphezulu.
Ukongezelela, intambo yeCGI yongezwa ukhonkcoza u-Han kwisiqwenga njengoko exhomekeke kwicala, kwaye umgca weHan xa uzama ukuhlangula uLando ushintshiwe "Kulungile, uthembele!" "Kulungile, ndiyabona ngcono kakhulu!" Zomibini zenguqu zenza ingqiqo kumxholo, kodwa ingenayo imiphumo eninzi kummandla jikelele.
KwiNgqungquthela Ekhethekileyo, ingoma yomculo we-Ewok ("Yub Nub") ithathelwa indawo entsha, "iSigubhi sokuNqoba." Esikhundleni sokugxila kwiiMvukelo kunye neentlangano zabo ezintsha ze-Ewok, thina kunoko sibona imifanekiso yamaplanethi ahlukeneyo kwi-galaxy ibhiyozela ukuwa kweBukhosi.
Olu tshintsho luphucula ukuphela, okwenza ukuphumelela kweNguqulelo kubonakale kukhulu kakhulu; Ukutshatyalaliswa koBukumkani kunokuchaphazela kuphela iqela elincinci leMvukelo, kodwa ikusasa legalaxy yonke. Ukongeza, i-Jedi Temple ibonakaliswe kakuhle kwi-DVD ukukhululwa, okubonisa ukuba, nangona i-Jedi Order yachithwa yatshatyalaliswa, iya kuvuselelwa kwaye iphile.
Umkhosi wamaHindu iThaipusam